Somaaliya: Qalab cusub oo dijitaal ah oo lagu hagaajinayo tayada daryeelka caafimaadka caruurta | ICRC da Soomaaliya
Somaaliya: Qalab cusub oo dijitaal ah oo lagu hagaajinayo tayada daryeelka caafimaadka caruurta
27/01/2021 , Maqaallo
Marka aad ilmahaaga u keento goob caafimaad si loo baaro, qalab elektiroonik ah oo cusub oo lagu hagaajinayo tayada adeegyada daryeelka caafimaadka caruurta ayaa hadda laga heli karaa xarumaha caafimaadka ee Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS), ee Raadeer, Gubadleey iyo Afgooye. Barnaamijkan cusub oo lagu magacaabo “ALMANACH “, waxa uu ka caawiyaa shaqaalaha caafimaadka in ay sameeyaan baaritaan jireed oo sax ah, ogaanshaha cudurka iyo qorista daaweynta habboon ee cudurrada caruurta.
“ALMANACH, oo isugu jirta daaweyn iyo ka hor-tag labadaba, waxa ay ku saleysantahay iskaashiga bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ay la leeyihiin qoysaska iyo bulshada. Waxa ay si aad ah u saameyn doontaa tayada daryeelka loo fidiyay caruurta “ayey tiri Ana Maria Guzman, oo xiriirisa howlaha caafimaadka ICRCda Soomaaliya.
ALMANACH (oo ah shax loogu talo galay maareynta cudurrada caruurta ee aadka u daran) waa barnaamij elektiroonik ah oo loogu talo galay xirfadleyaasha caafimaadka, oo ay ku jiraan dhaqaatiirta, kalkaaliyeyaasha, iyo shaqaalaha caafimaadka bulshada, oo laga heli karo taleefanada casriga ah iyo Taabletyada. Barnaamijkan ayaa ku caawinaya in ay raadsadaan oo ay dalbadaan xaaladaha iyo astaamaha caruurta, waxa ay keeneysaa baahida loo qabo in la sameeyo baaritaan jireed oo dhammeystiran iyo baaritaanno shey baar ah, in loo qoro daweynta ugu wax tarka badan iyo, sida ay xaaladdu noqon karto in canugga loo diro xarun kale oo caafimaad haddii aanan daweynta laga heli karin meesha. Qalabka waxaa sidoo kale laga heli karaa xog ku saabsan tas-hiilaadka caafimaadka ee laga heli karo deegaanka, sida dawooyinka, shaqaalaha caafimaadka iyo shey-baarka.
“laba bilood ka dib hirgalinta ALMANACH, waxaan durba arkay natiijada maareynta saxda ah ee xaaladaha iyo yareynta qorista dawooyinka Anntibiyootiga ah. Ka hor adeegsiga barnaamijka, kalkaaliyeyaashu waxa ay diiradda saarayeen astaamaha ilmaha ka dibna waxa ay ku deg-degayeen go’aanka helidda cudurka. Hadda iyaga oo adeegsanaya ALMANACH, waxa ay sameeyaan baaritaan jireed oo qoto dheer iyo taariikh weydiin, iyaga oo sidoo kale eegaya tijaabo shey-baar markii loo baahdo,” ayuu yiri Cabdulqaadir Xasan, oo ah sarkkaalka caafimaadka SRCS ee Muqdisho.
ALMANACH waxa ay sidoo kale bixisaa xogtii ugu danbeysay ee ku saabsan arrimaha caafimaadka caruurta waxa ayna siisaa hagitaan shaqaalaha caafimaadka sidii caruurta loo siin lahaa waxbarasho caafimaad iyo talo bulshada ku saabsan xaaladooda gaarka ah, tusaale ahaan muhiimadda naas nuujinta, quudinta dheeriga ah, daryeelka iyo daweynta lagu bixiyo guriga. Wadahadal heer bulsho ah ayaa waxaa qabanaya guddiga caafimaadka bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka, si bulshadu ay u fahanto barnaamijka ugana faa’iideysato.
“ bulshooyinka waa ay maqleen xog ku saabsan ALMANACH, waxaan u tagnaa qoysaska maalin kasta si aan ugu gudbino farriimaha ALMANACH, waxaan isticmaalnaa shax ka turjumeysa xaqiiqda dhulka ka jirta annaga oo adeegsaneyna sawirro la fahmi karo,” ayey tiri Faadumo Heri – oo ka shaqeysa horumarinta caafimaadka ee xarunta caafimaadka ee Afgooye.
Kala soco halkan warbixintii ugu danbeysay ee la xiriirta barnamaajka ALMANACH (Soomaaliya)
Barnaamijka ALMANACH ee Soomaaliya waa mashruuc lagu bilaabay iskaasgiga ICRCda, machadka Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), iyo ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS).